Makurukota eZanu-PF Obhadhara Zvikwereti kuZesa
Kurume 21, 2012
Makurukota mazhinji eZanu-PF ayo ane zvikwereti kukambani yeZesa, anonzi atanga kubhadhara zvikwereti kunyange hazvo ari kugunun’una achiti vebato reMDC rinotungamirwa naVaMorgan Tsvagirai, ndivo vakafukura hapwa nekuburitsa mazita avo mumapepanhau akaita seDaily News.
Vamwe vakuru kuZESA vanoti makurukota aya ari kunzi abhadhare mari inosvika zvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana yechikwereti zvavo.
Makurukota aya anonzi ari kupihwa mwedzi mitanhatu yekubhadhara zvikwereti izvi. Asi vazhinji vari kuti vari kuda kutanga vatengesa zvirimwa zvavo vasati vabhadhara zvikwereti izvi.
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, nemutevedzeri wavo, VaJohn Nkomo, ndivo vane mari yakawandisa pavanhu vasina kubhadhara mitero yemagetsi. VaMugabe vanonzi vane chikwereti chinodarika mazana matatu ezviuru zvemadhora.
Vamwe vane zvikwereti vanosanganisira gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, VaEmmerson Mnangagwa, gurukota muhofisi yaVaMugabe, VaDidymus Mutasa, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, VaWebster Shamu, uye gurukota rezvekuendeswa kwehupfumi kuvatema, VaSaviour Kasukuwere.
VaMutasa naVaKasukuwere vanoti havasi kufara nezviri kuitwa neZesa asi vanonzi vakaenda kunotaura neZesa pamusoro pemabhadhariro avangaite zvikwereti zvavo. Vamwe vakaenda kuZesa, inhengo dzeparamende dzakaita saAmai Oppah Muchinguri, uye muzukuru waVaMugabe, arizve nhengo yeparamende, VaPatrick Zhuwawo.
Ku MDC-T kune vanhuwo vane zvikwereti kuZesa, asi mari yacho ishoma kana ichienzaniswa nezvikwereti zvine vanhu veZanu-PF. Vari muMDC vane zvikwereti vanosanganisirawo VaTamsanqa Mahlangu nemutungamiri webato iri, VaMorgan Tsvangirai, avo vakaudza paramende kuti vakabhadhara chikwereti chavo kuZesa.
Mutauriri weZesa, VaFullard Gwasira, vanoti ichokwadi kuti zvikwereti zvave kubhadharwa nevakuru vehurumende ava.
Kambani yeZesa ine chikwereti chinosvika mamiriyoni makumi manomwe nemashanu emadhaora kukambani yekuMozambique yeHydro Cabora Bassa.
Gurukota rezvemhando dzemoto, VaElton Mangoma, vanoti Hydro Cahora Bassa yaderedza huwandu hwemagetsi ayinotengesera Zimbabwe nezvikamu makumi manomwe nezvishanu kubva muzana, kubva pa 200 mega watts kusvika pa 50 mega watts.
VaMangoma vanoti vari kuenda kuMozambique svondo rinouya kuti vanotaure kuti magetsi adzorwe paainge ari sezvo nyika yakatarisana nedambudziko remagetsi. Asi kambani yeHydro Cahora Bassa inoti haina kumbodzikisa huwandu hwemagetsi kuZimbabwe.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira, Muzvare Gladys Hlatwayo, vanoti veZanu-PF vanofanira kubhadhara zvikwereti kwete kuda kutsvaga huta nemugate.
Hurukuro naMuzvare Gladys Hlatshwayo